Shiinaha oo siinaya 30Khz Ultrasound Qalabka Qalabaynta ee Robot Gacmo Goynta iyadoo la isticmaalayo Soo-saar iyo Warshad | Qianrong
Bixinta 30Khz Qalabka Jarida Ultrasound ee loogu talagalay Robot Gacmo Goynta Isticmaalka
Shayga No QR-C30Y
Miisaanka Balladda 1.25kgs
Miisaanka guud 11.5Kg
Codsiga Mashiinka jarjaraha
Mabda'a mindi goynta ultrasonic waa in loo beddelo 50 / 60Hz hadda 20, 30 ama 40kHz tamar koronto iyada oo loo marayo matoor ultrasonic. Tamarta korantada-soo-noqnoqda badan ee la beddelay ayaa mar labaad loo beddelay gariir farsamo oo isku mid ah iyada oo loo marayo transducer-ka, ka dibna gariirka farsamada waxaa loo gudbiyaa mindi goynta iyadoo loo marayo aaladda qalabka wax lagu beddelo qiyaasta oo beddeli kara baaxadda. Qalabka wax lagu gooyo ee ultrasonic-ka ayaa ku ruxruxaya dhererkiisa oo leh cabbir 10-70μm ah, kuna celcelinaya 30,000 jeer (30 kHz) ilbiriqsi kasta (gariirka daabku waa microscopic, oo guud ahaan ay adag tahay in lagu arko isha qaawan). Mindi goynta ayaa markaa ku wareejineysa tamarta gariirka heley dusha sare ee qeybta shaqada si loo jaro. Aaggan, tamarta gariirka waxaa loo isticmaalaa in lagu jaro cinjirka iyadoo la dhaqaajinayo tamarta moodeelka ee cinjirka isla markaana la furayo silsiladda molikiyuulka
Mashiinka ku rakiban qalabka jarista mindi-goynta ultrasonic
1. Si fudud loo codsado wax soo saarka otomaatiga ah.
2. 1mm daab ayaa wax yar lumiya maaddada.
3. Degdeg dhaqso ah, waxtarka sare iyo wasakh la’aan.
4. Saxsanaanta goynta ayaa sarraysa, walxaha cinjirka ahna ma xuma.
5. Dusha sare ee gooyuhu wuxuu leeyahay jilicsanaan wanaagsan iyo waxqabadka isku xidhka wanaagsan.
6. Qalabku wuu yaryahay wuuna u isticmaali karaa jarista gacanta.
1. Xasilooni sare: Generator-ka ultrasonic wuxuu dhaliyaa gariirka electromagnetic-ka marka uu shaqeynayo, wuxuuna u beddelaa oscillation farsamo wuxuuna u gudbiyaa mindiyo goynta iyo qalabka jarista. Goynta farsamada ayaa la sameeyaa, sidaa darteed looma baahna jaritaan fiiqan, oo xirashada daabku waa yar tahay, isla mar ahaantaana Madaxa jarjarka waa la beddeli karaa laftiisa.
2. Badbaadada iyo ilaalinta deegaanka: Marka mindi ultrasonic la jaro, heerkulka madaxa wax gooyaa wuxuu ka hooseeyaa 50 darajo Celsius, mana soo baxayo qiiq iyo ur, taas oo meesha ka saaraysa halista dhaawaca iyo dabka inta la gooyo.
3. Wax u jarid si habsami leh: Maaddaama mowjadda Xiinka ay goysay gariir aad u sarreeya, maaddadu uma hoggaansami doonto dusha sare ee daabka, kaliya waxaa loo baahan yahay cadaadis yar oo goynta ah, walxaha jilicsan iyo kuwa jilicsanna ma ahan kuwo qaab daran oo aan xirneyn, oo dharka ayaa la gooyaa oo si otomaatig ah ayaa loo xidhaa. Ma keeni doono jarjarid.
4. Hawlgal fudud: Mindida goynta waxay kuxirantahay koronto dhaliyaha, koronto-dhaliyuhu wuxuu kuxiran yahay 220V dhaxe, badhanka waa la jari karaa si loo taageero gacan-qabashada iyo mashiinka lagu jaro.
Hore: Gacanta Waxaa Lagu Qabtaa 40khz Xiinka Cunnada Xiinka leh Generator Dijitaal ah Mindi Mindi Ku Taagnayn
Xiga: Ultrasonic Cutter oo leh 35Khz Frequency for Cuting Qalabka kala duwan ee iskudhafan